Rikoorka Rakaabka lixda bilood ee ugu horeysa garoonka diyaaradaha Atatürk | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDiiwaanka rakaabka ee Lixda Bilood ee Ugu Horeeya ee Ataturk
25 / 07 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
Tirada rakaabka qaada garoonka diyaaradaha ee Istanbul; 2018 ee koowaad ee 6, marka la barbardhigo isla muddadani sannadkii hore, 5 ayaa kordhay malaayiin 501 kun 93. Garoonka Ataturk 32 million 558 kun 271 kun rakaab ayaa jabiyay rikoorka.
Bishii ugu horeysay ee 2018 ee 6, rakaabkii 32 558 kun rakaab ah ayaa loo adeegsaday garoonka Ataturk. Airport Ataturk Turkiga, ugu weyn by tirada rakaabka, ay ka mid yihiin duulimaadyo gudaha iyo kuwa caalamiga ah, wadar ahaan 271 16 260 million Airport kun a Gökçen Sabiha, iyadoo tirada rakaabka ayaa raacay. Tirada guud ee dadka rakaabka ah ee ku nool laba garoon oo ku yaalla Istanbul ayaa kordhay 256 million 5 kun 501 marka la barbar dhigo isla muddadiisii ​​sannadkii hore oo ay gaareen 93 million 6 kun 48 bishii koowaad ee 818 ee sanadkan.
Magaalooyinka soo raacay Istanbul ee ugu sareeya liiska sanad kasta ee 2018 ee ugu horreeya ee 6 waa; Ankara, Antalya iyo Izmir waxay noqdeen magaalooyin waaweyn. Markii ugu horeysay ee 6 ee Ankara ee sanadkan, waxaa la siiyay rakaab ah 8 million 733 kun 87, gudaha iyo caalamkaba; İzmir waxay martigalisay 6 million 461 kun 800 iyo rakaabkii 11 ee 808 kun 378. In Turkey, tirada guud ee rakaabka ayaa lagu daray in si toos ah transit kun 97 693 685 million.
Sanadkan 2017, kaliya duulimaadka gudaha iyo kan caalamiga ah, Garoonka Ataturk Airport 28 million 876 kun rakaab ah ayaa loo adeegsaday. Sabiha Gökçen, tiradan waxaa loo aqoonsaday 193 million 14 kun 441.
SIDA ISTANBUL SADDEX AIRPORT JIRO
2018 kun warbaahin 70, oo ku xiran garoomada diyaaradaha ee sanadka 659, ayaa la go'aamiyay. Inkastoo tirada warbaahintu ay ahayd 51 kun 591 isla muddadaa sannadkii hore, Madaarka Garoonka Diyaaradaha Istanbul ayaa ka mid ah kuwa ugu hadalheynta badan ee 2018.
Akkaray Qorshaha Cusub ee 1 Million Rakaab
Bursaray 14 wuxuu qorayaa Rakaabka Rakaabka ee Juun
UTIKAD 19 waxay soo saartaa gawaarida mustaqbalka mustaqbalka Soomaliya 2018